Dock uye inodzivirira kesi yeApple Watch isingasviki matanhatu euros | Ndinobva mac
Ndingadai ndaifarira kuve nemukana wekuti nhasi ndinokuratidza maererano nebhokisi rekudzivirira umo maungaisa yangu Apple Watch pandinoibvisa husiku hwoga hwoga kuti ndikwanise kuibhadharisa. Mune network yemasaiti pane mikana yakawanda uye mamodheru ekugona kudzoreredza iyo Apple Watch uye kunyange kuichengeta, asi mashoma neiyi yakapfava uye zvakare uine mukana wekuita kuti ivharwe zvachose.
Mune ino kesi isu tine kesi yakagadzirwa zvizere zvepurasitiki, ine chakavanzika chivharo chinopa mukana wekugona kuona iyo nguva yeiyo pachayo patinayo muhusiku mode modhi iyo, sekuziva kwaunoita iwe, ndiyo inoshanda mode iyo Apple kare yapfuura yaisanganisira muOSOSOS system iyo iyo nguva inoratidzwa pachiratidziro patinoisa wachi kutakura.
Sezvauri kuona, iri bhokisi rine makona akapoteredzwa akagadzirwa nemishonga yepurasitiki uye ine chivharo chakajeka. Mukati medu tinogona kumutsidzira induction yekuchaja tambo inouya newachi, saka tinogona kuishandisa kudzosera wachi pamwe nekuichengeta.
Sezvo iine chakavanzika chepamusoro chevhavha, tinogona kuona zvese zvinoitika pachiratidziri tisina kuchibvisa mubhokisi. Kana iri saizi yayo, yakasimba kwazvo uye unogona kuiwana chero kupi zvako mumba mako. Sezvauri kuona mumifananidzo, Dhizaini yayo ndeye minimalist uye yakapusa saka haufanire kunge uri injinjini yemagetsi kuti uishandise.
Pasina kupokana iyo ndeimwe yesarudzo dzakachipa pane dzandinadzo uye chibvumirano pamambure uye ndezvekuti isingasvike mayuro matanhatu iwe unogona kuwana imwe mumba mako. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve ichi chigadzirwa unogona kushanyira chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dock uye inodzivirira kesi yeApple Watch isingasviki matanhatu euros
David na ma akadaro
Sergio Garcia Ruiz chigadziri chemufananidzo
Pindura David Na Ma
Sergio Garcia Ruiz chigadziri chemufananidzo akadaro
Pindura Sergio Garcia Ruiz
Iyo HomePod inongotaura Chirungu panguva yekutanga